dza ɔabasen odzi do
Enos Nwoma No
1 Hwɛ, ɔbaa dɛ emi, aEnos, minyim dɛ m’egya byɛ nyimpa a odzi pɛrpɛr—na cɔkyerɛkyerɛɛ me wɔ ne kasaa mu, na hwɛ, dɔyɛn me wɔ Ewuradze so ho setsie nye kasa kyerɛ mu—na nhyira nkã me Nyame ne dzin wɔ ho—
2 Na mebɛkã hom aaper a medzi wɔ Nyame enyim, ansaana me nsa rekã me bbɔnfakyɛ.
3 Hwɛ, mokɔr dɛ merekɛyɛ ha eku mbowa wɔ haban mu; nna nsɛm a daa metse dɛ m’egya rekã a ɔfa onnyiewiei nkwa ho, na ahotseweefo hɔn ndaamba adɛw a wobedzi ho adwen bhyɛɛ m’akoma mã.
4 Na aɔkɔm dzee me kra; na bmubuu ntwɛr wɔ me Yɛfo enyim, na medze cmpaabɔ a ɔyɛ dzen totɔe serɛɛ no wɔ mara me kra ntsi; na musũi frɛɛ no da no nyina; nyew, na adzesaa no so memaa me ndze do dzendzenndzen ma odur sor.
5 Na andze bi baa mo hɔ see dɛ: Enos wɔdze wo bɔn akyɛ wo, na wobehyira wo.
6 Na emi, Enos, minyim dɛ Nyankopɔn nndzi ator; dɛm ntsi, wɔpepaa m’afɔdzi.
7 Na mesee dɛ: Ewuradze, ɔyɛ dɛn yɛ?
8 Na ɔsee me dɛ: Osian wo agyedzi a ɔwɔ Christ a enntsee ne nkã da na innhun no da no mu ntsi. Na mfe pii botwa mu akɔ ansaana ɔada no ho edzi wɔ honam mu; dɛm ntsi kɔ, wo gyedzi bagye wo.
9 Na afei, ɔbaa dɛ metsee dɛm nsɛm yi no minyaa apɛ bi dɛ mobɔhwehwɛ mo nuanom a wɔyɛ Nephifo no hɔn yieyɛ; dɛm ntsi, bmuhue me kra nyina bɔɔ mpaa maa Nyankopɔn wɔ hɔn ntsi.
10 Na aber a miridzi aper wɔ sunsum mu no, hwɛ, Ewuradze ne ndze baa am’adwen mu bio dɛ: Mobɔkɔ akɛsera wo nuanom no ber a wobedzi me mbrasɛm do enyiberdo no. bMedze asaase yi ama hɔn, na ɔyɛ asaase krɔnkrɔn; na cmoronndom no, gyedɛ ɔnam hɔn emumuyɛ do; dɛm ntsi, mobɔkɔ akɛsera wo nuanom no dɛ mbrɛ makã no; na awerɛhow mu na medze hɔn mbrato bogu hɔnankasa hɔn etsifi.
11 Na emi, Enos, metsee dɛm nsɛm yi ekyir no, me gyedzi hyɛɛ ase dɛ oritsim wɔ Ewuradze mu; na mber tsentsen nyina midzii aper dze bɔɔ mpaa maa no dze maa mo nuanom Lamanfo no.
12 Na ɔbaa dɛ aber a amobɔɔ mpaa na meyɛɛ ndwumadzen ekyir no, Ewuradze see me dɛ: Osian wo gyedzi ntsi, mebɛyɛ bw’apɛdze ama wo.
13 Na afei hwɛ, iyi nye adze a nna morohwehwɛ wɔ no hɔ—dɛ sɛ ɔbɛyɛ a, nkyɛ sɛ mo nkorɔfo Nephifo hwe ase wɔ mbrato mu, na ɔnam kwan bi do awɔsɛɛ hɔn na wɔrennsɛɛ Lamanfo no a, Ewuradze Nyankopɔn bnkora mo nkorɔfo Nephifo hɔn kyerɛwsɛm do yie; sɛ ɔbɛyɛ mpo a, ɔmfa n’abaw krɔnkrɔn no tum no, ama cwoeyi epue ndaamba ama Lamanfo no, ama sɛ ɔbɛyɛ a, ɔdze hɔn daaba nkwagye mu—
14 Na seseiara dze, hɛn aperdzi a yedzii dɛ yɛdze hɔn bɛba gyedzi a osi pi no mu no ayɛ akwa. Na wɔkã ntam wɔ hɔn ebufuhyew mu dɛ sɛ ɔbɛyɛ a, bwɔbɛsɛɛ hɛn kyerɛwsɛm na hɛnankasa, na hɛn egyanom amambra nyina so.
15 Dɛm ntsi, emi minyim dɛ Ewuradze Nyankopɔn botum aakora hɛn kyerɛwsɛm no do yie ama hɛn ntsi, musũi frɛɛ no aber nyina osiandɛ wɔakã akyerɛ me dɛ: Biribiara a hom bebisa wɔ gyedzi mu no, a hom gyedzi dɛ hom nsa bɛkã wɔ Christ ne dzin mu no, hom nsa bɛkã.
16 Na menyaa gyedzi, na musũi frɛɛ Nyankopɔn ama aɔaakora bkyerɛwsɛm no do yie; na ɔnye me dzii ahyɛmu dɛ ɔdze cbopue ama Lamanfo no wɔ noara ne ber mu.
17 Na emi, Enos, minyim dɛ ɔbɛyɛ dɛ mbrɛ n’ahyɛmudzi no tse; dɛm ntsi me kra homee.
18 Na Ewuradze see me dɛ: W’egyanom so ebisa me dɛm adze yi; na ɔbɛyɛ hɔ ama hɔn dɛ mbrɛ hɔn gyedzi tse; osiandɛ hɔn gyedzi tse dɛ wo dze no.
19 Na afei ɔbaa dɛ emi, Enos, mikyimaa Nephi no nkorɔfo no mu na mehyɛɛ nkɔm wɔ ndzɛmba a ɔbɛba ho, na megyee dase wɔ ndzɛmba a matse na mehu ho.
20 Na megye dase dɛ Nephi no nkorɔfo no per dɛ wɔdze nkenyan bɛma Lamanfo no ma woehu gyedzi a osi pi no a ɔwɔ Nyame mu no. Mbom hɛn adwumadzi yɛɛ kwa; hɔn enyitan dɔɔ sõ, na hɔn su bɔn no maa wɔbɛyɛɛ yerɛyerɛw, abɔyafo, na nkorɔfo a bwɔpɛ bɔgya, cabosonsom na efĩfĩdze pii ne yɛ; nkorɔfo a wodzi mbowa hɔn mbowa biara a wɔbɔtɔ hɔn boa mu, wɔtsetse ntamadan mu, na wokyinkyin sar do a wɔdze nwoma nketsenketse esisi hɔn asen na wɔapra hɔn tsir; na hɔn nyimdzee wɔ degyen na ekuma ne yɛ ho dɔɔ sõ. Na hɔn mu dodowara nndzi hwee kã nammon ho; na mber nyinara wɔper dɛ wɔbɛsɛɛ hɛn.
21 Na ɔbaa dɛ Nephi no nkorɔfo no yɛɛ ekuafo, na awoduaduaa eburow na nduadzewa ahorow pii na wɔnyɛɛn mbowa ahorow so, nguankuw, anantwikuw, na mpɔnkye nye hɔn ahorow, na mpɔnkɔ so pii.
22 Na ankɔnhyɛfo pii soɛree wɔ hɛn mu. Na nkorɔfo no yɛ bakɔnkyefo, nkorɔfo a hɔn ntseasee yɛ dzen.
23 Na biribiara nnyi hɔ kã dza ɔyɛ adzen ho, bnsɛmpakã na nkɔnhyɛ a ɔfa akõkoekõ, na wentwiwentwi, nye ɔsɛɛ ho, na aber nyina cwɔkaakaa hɔn wɔ owu na mbersantsen ne mber tsentsen ho na atsɛmbu nye Nyankopɔn no tum ho, na dɛm ndzɛmba yi nyina—wɔdze kenyan hɔn daber nyina ama wɔaatsena wɔ Ewuradze ho suro mu. Mekã dɛ biribiara nnyi hɔ a ɔtɔ sin wɔ dɛm ndzɛmba yi ho kã, kasa pefee a nkyɛ ɔbɔtwe hɔn ekyir efi ɔsɛɛ ntsɛntsɛm mu. Na dɛm kwan yi do na mefa kyerɛw dza ɔfa hɔnho.
24 Na muhun akõkoekõ pii a osii Nephifo na Lamanfo mu wɔ mo nkwa nda mu.
25 Na ɔbaa dɛ mehyɛɛ ase dɛ mereyɛ akɔdaa, nna mfe ɔha eduosuon akron na ebotwa mu kɔ fitsi ber a hɛn egya Lehi afii Jerusalem.
26 Na muhun dɛ ɔnnkɛkyɛr na makɔ me ndamu, na Nyame no tum baa mo do dɛ menkyerɛkyerɛ na menhyɛ nkɔm na menda nsɛm no a ɔyɛ nokwar wɔ Christ mu no edzi nkyerɛ nkorɔfo no, na mada no edzi wɔ mo nkwa nda nyina mu, na medzi dɛw wɔ mu kyɛn dza ɔyɛ wiadze dze.
27 Na ɔnnkɛkyɛr na makɔ am’ahomgye bea do wɔ mo Pomfo nkyɛn; na minyim dɛ no mu na mobɔhom. Na midzi dɛw wɔ dɛm aber no a me dza bɔnnkyebo yi a ɔnnkye bo yi bɛfa cbɛkyebo ahyɛ, na mibegyina n’enyim; nna medze enyigye bɔhwɛ n’enyim, na ɔbɛse me dɛ: Bra me nkyɛn, ɔwo a woehyira wo, woesiesie bea ama wo wɔ m’Egya dfie. Amen.